Kuwa ugu wanaagsan ee 4tas. Jornadas gvSIG ... - Geofumadas
Kuwa ugu wanaagsan ee 4tas. GvSIG ...
Maarso, 2009 ArcGIS-ESRI, GvSIG
Qaar badan oo ka badan isku raacsan yihiin in kuwa ugu wanaagsan helay maalmihii la soo dhaafay ahayd garasho sogordahan Sooryo magazine in ay dhacdo, taasoo ka dhigan shaqo weyn ma aha oo kaliya in content laakiin dhadhanka garaafka. Waayo, kuwa helay print u badan tahay waxa ka dhigan gabal qiimo ururinta sida kuwa dhawra qoslo Obelix in jirridda da 'weyn, laakiin aad u wanaagsan oo ina xusuusinaya in hadiyad weyn ka aabbe noo ah.
Dib u eegida ku jira, kuwaas oo kadis ah waxaa la daabacay hoos Creative Commons, waxa aan arki karnaa arrimo kala duwan si aad u wanaagsan u maareeyeen ku saabsan horumarinta gvSIG iyo waraysiyo lala yeeshay dad ku lug leh horumarinta iyo hirgelinta labada hay'adaha jaamacadaha iyo dawladda. Halkan waxaa ku qoran warbixin kooban oo ah kuwa ugu wanaagsan:
Wayna u yeedheen afar sano oo horumar, afar sano oo rajo ah; oo maaha in lagu jahwareeriyo waxa laga yaabo inay tahay Ereyga ereyga ayaa horumarinaya mawduucyada sharaxaya taariikhda dhacay, waxa la qabanayo iyo halka uu mashruucu ku socdo. Marxaladdan dukumeentiga ah waxaa lagu qaabeeyey mawduucyada soo socda:
Baaritaan wadajir ah
Laga soo bilaabo wareysiyada
Kuwaas waxaa lagu sameeyey daryeel weyn, sidaas darteed waxaan arkaa inay qorsheynayaan in ay ku siiyaan aragtida ah in mashruucan u qalmo oo sannadkii hore uu yahay mid aad u culus oo ay sameeyeen dadaal badan, tani waa mid u qalma in la aqoonsado shaqada istiraatijiyadda isgaadhsiinta.
Halkan waxaan ku soo koobayaa qaar ka mid ah wareysiyada kaliya si ay u dhameeyaan xiisaha.
Khabiir ku takhasustay IDES, wuxuu hadda yahay Madaxa Tiknoolajiyadda Machadka Geographical Institute ee Argentina iyo isuduwaha mashruuca PROSIGA. Wareysiga lala yeelanayo Carlos Figueira Venezuela waxa ay ka hadashaa muhiimada ay leedahay isticmaalka software-ka bilaashka ah ee hay'adaha dawliga ah inta badan degmooyinka heer dhaqaale oo xadidan. Waa in la fahmo sababta Sabtida Maalmood ee 2009 ay noqon doonto Argentina.
wareysi aad u xiiso badan, taas oo redial qoraalka ay na xasuusinaysaa in biilka Microsoft oo kaliya 800 milyan oo doolar sanadkii Latin America, si software lacag la'aan ah ma aha oo kaliya qayb muhiim ah oo dhaqaalaha ka mid ah dawladaha laakiin in dagaal kale oo ay burcad-badeednimada iyo maalmaha la leh aan u muuqdaan in ay Afrika.
Ku xigta Chris Puttick Waxay ka hadlaan habka yurub ee ku saabsan codsiga bilaashka ah ee barnaamijyada bilaashka ah ee gobolka, iyo sidoo kale faafinta in kuwa ku lugta leh waa inay ciyaaraan. Waxaa xusid mudan in Alessandro uu ciyaaray door muhiim ah (haddayna dhammaan) doorka tarjumaadda Talyaaniga ee buugaagta gvSIG.
Antoni de la UOC Waxay ka hadlaysaa sida barnaamijka bilaashka ah uu ula tartamayo ganacsiyada kale sida INTERGRAPH iyo ESRI oo leh barnaamijyo iskaashi leh jaamacado kala duwan. Waxa kale oo ay diiradda saartaa arimaha anshaxa, siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka soo horjeeda iskuullada si kor loogu qaado xalka wada shaqeynta sida software lacag la'aan ah iyo meesha Ardayda kuleejka ahi waxay leeyihiin fursado xiiso leh.
Wareysigu waa mid ballaaran, oo wadajir ah Lluís Vicents oo ka socda kooxda macalimiinta ee UNIGIS, fikrado fiican iyo tabarucaad ka soo jeeda jaamacadda aragtida waa la cabbaa.
Dhamaadka dhammaadka wareysiga ayaa la socda Juan Antonio Bermejo waxaad ogaatay sababta ay in doorashada ee gvSIG sida qalab ka shaqeeya mashaariicda la xiriira Geographic Information Island Golaha La Palma yimid, sidoo kale waxay la talooyin qaar ka mid ah tashan doonaa inuu yimaado faa'iido u ah maalmaha soo socda.
Waa maxay sababta, magazine waa mid aad u wanaagsan. Ugu hadal dhamaadka isbedelka in loo arki karaa on web ku saabsan gvSIG, oo ay ku jiraan codsiga ah ee Google loo yaqaan "Dhugasho" oo la soo bandhigay ku salaysan keywords koritaanka in uu qaatay gvSIG dheer iyo wadamada ka soo jeedo.
Ka dibna sidoo kale leh Google Trends, waxay muujiyaan sida koritaanku u dhaqmayo marka la eego shuruudaha tartanka sida Geomedia, ArcView, Mapinfo waana la yaabi lahaa si ay u arkaan waxa garaafyada ka tarjumaya. Hadda waxaan ka tagaa pike, fiiri bogga gvSIG sababtoo ah uma maleynayo inay qaadato waqti dheer in la hello sawirada pdf si ay u soo qaadato haddii ay u adeegsadeen inay noqdaan kuwo hal abuur leh.
ArcView ESRI GvSIG OS majallado
Post Previous«Previous Bentley Sign, Shema wizzard
Post Next Geofumadas, bishiiba, boostoNext »
8 Jawaab "Inaad ka fiican tahay 4tas. Jornadas gvSIG ... "
Arrinta xogta juqraafi ee aasaasiga ah waa dhibaato weyn oo ka jirta Argentina. Si aad u sheegto in wax walba la siiyay si gaar ah waxay noqon kartaa qalad si miiska loogu daaweeyo hab aad u fudud.
Nasiib darro Argentina, wax soo saarka wax soo saarku waa lacag la'aan. Haddii aynu eegno metadata ee 1 xogta: 250.000, xogta portal PROSIGA IGM ah, qaar badan oo data, kuwaas oo ku noqo sano ah 30, 40, 50. Xitaa 250.000 in si digital badan ka ah dadaal lagu jiro 96-98 ma laha xiriir ah hadda. Ma jiraan wax kale oo la heli karo tan iyo wakhtigaas oo ay ugu wacan tahay lacag la'aan. Waan ogahay in dad badani ay sameeyeen dadaal, wakhti iyo lacag SHARCIYEED si ay u ilaaliyaan macluumaadkaas in muddo tobanaan sano ah aan la sii wadi karin. Dhinaca kale, FDI ka dhigan tahay tayada iyo la xisaabtanka, taas macnaheedu waa in jirku wuxuu sameeyaa heli karo xogta waa in sidaas la sameeyo iyada oo gacanta ku tayada habboon, dhalin dukumentiyada ku habboon, la qeexo xuduudaha ka geynta, iwm, iwm, iwm Oo in kastoo rumaysan, wax walba oo soo baxa lacag aad u badan, lacag in gobolka aan maal in ay sii macluumaadka, iskaba daa in ay curiyaan xogta badan ee loo baahan yahay.
Wargeyska waxaa laga soo dejin karaa webka
Haa, inaan kula joogo mowduucan ka weyni IDEs, waxa dhaca waa (ugu yaraan kiisaska aan ogahay) marar badan maamulku ma hago machadyada khariidadaha sida xarumaha cilmi baarista iyo soosaarista sawirada. bulshada laakiin waa "bakhaarro" kaliya oo qof kastaa u baahan yahay inuu iibsado.
Waxaan weli xasuustaa cillad la'aanta bixinta (ma xasuusto inta uu le'eg yahay) ee koobi ah ee dib u eegis lagu sameeyo muraayad juquraafi ah oo wata wafdi IGN ah, markii ay jirtay sanado badan oo laga yaabo in lagu daabaco webka.
Anyway, haddii aad xiiseynaysid in mawduucyada hayee free, waxaad joojin kartaa by liiska OSGeo-es , waxaa jira koox dad ah ururinta xogta dhigaya si xor ah laga heli karo iyo guud ahaan ka shaqeeya aagga in .
Shirka, sida xaqiiqada ah mawduuca waa in lagu taabto mid ka mid ah soo bandhigyada. Joornaalka, si toos ah maahan, kaliya Chris Puttick wuxuu si kooban uga hadlayaa wax isaga la xiriira, markii wax laga weydiiyay doorka software-ka bilaashka ah ee maamulka guud (Bogga 20)
Hello, hal wax: qofna miyuu ka hadlayaa codsiga GvSIG ee geomarketing? waa in la daabaco wax la xidhiidha baqshadeyda marka ay daabacaan pdf ee shirka.
Gerardo Paz isagu wuxuu leeyahay:
Jorge, shaqooyinkan waxaa horay u bixiyay Gobolka iyada oo loo marayo miisaaniyad loo qoondeeyay Machadka. Markaan idhaahdo Gobolka, waxay lamid tahay dadka reer Argentine. Si wada jir ah ayaan u bixinaa horumarinnadaas, sidaa darteed, annaga oo ka dalbanayna, waa inaan awoodno inaanu si xor ah u tuurno, sababtoo ah lacag ayaa horay loo siiyay. Mise waxaa laga yaabaa inaad iibsato wax aadan dooneynin inaad guriga kula qaadatid? Hagaag, mar hore ayaan "iibsan" laakiin iyagu nama siinayaan ..
Taasi waa inay meel kale ka dhacdaa ... sifiican, iyadoon la xumayn, xusuusnow odhaahda "Shar badan oo, qalbiqaboojin kuwa nacasnimada ah! .. Waa wax aan u baahanahay. Waxaan ka cabanaa canshuuraha laakiin uma baahnin iyaga inay na siiyaan waxa aan ku bixinay.
Juan Ernesto ayaa ka hadlay barnaamijka, ma aqaan waxa ay tahay in la sameeyo faafinta xogta lacag la'aanta ah.
Dhibaatadaas aad soo sheegtey waa guud ahaan dal kasta oo adduunka ah marka laga reebo Maraykanka iyo Kanada, iyo kiis kale oo sharaf leh.
Spain ugu yaraan waxaan horey u soo qaadnay xogta loo adeegsanayo isticmaalka aan ganacsiga ahayn ururada soo saara kartoonada (IGN, Catalonia, Murcia, ...), laakiin weli waxaa jira hab wakhti dheer ah oo lagu heli karo xog dhab ah oo lacag la'aan ah. Nasiib wanaag waxaan haysanaa software-ka. 🙂
Qoraal wanaagsan. Nasiib xumo in la arko Juan Ernesto Ricket oo ka tirsan Machadka Militariga ee Juqraafiyiinta ee Argentine ayaa ka hadlay "muhiimadda ay leedahay in barnaamijyo bilaash ah loo adeegsado xarumaha dowladda, inta badan degmooyinka heerarkoodu kooban yihiin", marka, run ahaantii, waa MUHIIM in la soo dejiyo xogta GIS elektiroonig ahaan si bilaash ah u isticmaal machadka.
Taasi, dadkaas, kuwaas oo ah shaqaale dawladeed, oo isticmaala khayraadka dalka Argentine si ay u fuliyaan shaqadooda, iyo kuwa u muuqda inay badbaadinayaan khayraadka si fiican u isticmaalaya software bilaash ah, DENY in dadweynaha si xor ah u soo dejiyaan xogtaas. Waxaan fahamsanahay in khariidad daabacan ay leedahay kharash. Laakiin wax soo saarka macluumaadka dijitaalka ah ayaa la bixiyay, iyadoo si buuxda miisaaniyadda loogu qoondeeyey Dawlada Argentine ee Machadka.
Fiiri tusaalaha Kanada, kaas oo aan xitaa u baahnayn in qof Kanada ka tirsan inuu xog ka helo dalka ....